Meghan Markel ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံဟာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ? – FemaleWear.net
Meghan Markel ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံဟာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မလဲ?
မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် မေလ ၁၉ရက်နေ့မှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့တော်ဝင်မင်းသား Harry နဲ့ Meghan Markel တို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တော်ဝင်မိသားစုတွေ၊ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေ မင်္ဂလာဆောင်ရင် သတို့သမီးဝတ်မယ့် မင်္ဂလာဝတ်စုံကဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာ လူတွေစိတ်ဝင်စားကြသလို ကာယကံရှင်တွေကလည်း မင်္ဂလာနေ့မရောက်မခြင်း သိုဝှက်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ ယခုအခါ Meghan ရဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဆိုတာကို စိတ်ဝင်စားသူ ဒီဇိုင်နာတစ်ချို့က ခန့်မှန်းချက်တွေထုတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါတွေကိုစပ်ဆက်ပြီး သူမရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုပုံဖော်ကြည့်ရအောင်နော်။
၁။ Meghan Markel ဟာ မင်္ဂလာဝတ်စုံနှစ်စုံဝတ်ဖို့များပါတယ်။ Harry နဲ့ Meghan Markel တို့က မင်္ဂလာပွဲနှစ်ပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေငြာထားတာမို့ Meghan က မင်္ဂလာဝတ်စုံနှစ်စုံချုပ်မှာသေချာသလောက်ပါပဲ။ တစ်စုံက ရိုးရာပွဲတက်ဂါဝန်အဖြူဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုကတော့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဒီဇိုင်းဖြစ်ဖို့များပါတယ်။
၂။ Victoria Beckham က သူမရဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံကိုချုပ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Markel ဟာ Victoria ရဲ့ လက်ရာဝတ်စုံတွေကိုမကြာခဏဝတ်ဆင်လေ့ရှိတာကြောင့် သူမရဲ့မင်္ဂလာဝတ်စုံကို Victoria Beckham ကပဲချုပ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းမှုတွေရှိပေမယ့် မကြာခင်ကပဲ ဒါကို Victoria ကငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပွဲရောက်ဖို့ တစ်လခန့်သာလိုတော့တဲ့အချိန်အထိ တော်ဝင်မိသားစုကသူမကို မင်္ဂလာဝတ်စုံချုပ်ပေးဖို့ လာရောက်အပ်နှံတာမျိုးမရှိဘူးလို့ သူမကပြောပါတယ်။
၃။ ဒီဝတ်စုံဟာရှေးရိုးဆန်ပြီး အရမ်းရိုးရှင်းပါလိမ့်မယ်။ Meghan ဟာ လွပ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး ခေတ်ဆန်တာကိုနှစ်သက်သူဖြစ်ပေမယ့် သူမလက်ထပ်ပွဲဟာတော်ဝင်အခမ်းအနားတစ်ခုဆိုတာမေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ ဒါကြောင့် သူမအနေနဲ့ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးထက် ရိုးရှင်းပြီး ဂုဏ်သရေရှိမယ့်ဒီဇိုင်းမျိုးကိုဝတ်ဆင်ရပါလိမ့်မယ်။ Kate Middleton ရဲ့ ဝတ်စုံလိုမျိုးပေါ့။
၄။ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ဒီဇိုင်းမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Meghan က သူမရဲ့စိတ်ကူးထဲက မင်္ဂလာဝတ်စုံဟာ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ဒီဇိုင်းမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေဖူးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမရဲ့အိပ်မက်အတိုုင်း သူမမင်္ဂလာဝတ်စုံကိုပုံဖော်မှာ မလွဲပါဘူး။
၅။ Kate Middleton ရဲ့ ဝတ်စုံထက်စျေးပိုကြီးမှာလား? ကောလဟာလတွေအရ Meghan ရဲ့ဝတ်စုံက Kate Middleton ထက်စျေးပိုကြီးမယ်လို့ခန့်မှန်းကြပေမယ့်ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါဘူး။ Kate ရဲ့ မင်္ဂလာဝတ်စုံက ပေါင် ၁၅၀၀၀၀ ကုန်ကျပြီး လူချမ်းသာဖြစ်တဲ့သူမမိဘတွေက စိုက်ထုတ်ဝယ်ပေးခဲ့တာပါ။ Meghan ကတော့အဲ့ဒီလောက် သုံးနိုင်ဖို့မသေချာပါဘူး။
နွေရာသီအားလပ်ရက်တွေကို ရင်ဆိုင်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ?
အရပ်ရှည်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ ဝတ်ဆင်သင့်သော Jean Pants ဒီဇိုင်းများ